မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ/မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ/စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - Meta
၁ ဝီကီမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကြော်ငြာများအကြောင်း မည်သည့်နေရာတွင် လေ့လာနိုင်သနည်း။
၂ How can I request Wikimedia support for my charity?
၃ How can I proposeanew project oranew way to do things on an existing project?
၄ May I use your logos or trademark?
၅ May I use your software on my own site?
၆ May I reuse text or images from your sites?
၇ May I mirror or copy your sites?
ဝီကီမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကြော်ငြာများအကြောင်း မည်သည့်နေရာတွင် လေ့လာနိုင်သနည်း။
ဝီကီမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်းသည် ကြော်ငြာကို လက်မခံပါ။
ဝီကီမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်းသည် အွန်လိုင်းကြော်ငြာကမ္ဘာနှင့်မကိုက်ညီပါ သို့မဟုတ် ကြော်ငြာများကို လက်ခံသော အခြားအဖွဲ့အစည်းများဆန့်ကျင်သည်၊ ကြော်ငြာကိုပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုမှာ ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ မယုံကြည်ပါဘူး၊ အထူးသဖြင့်မျှတသော၊ ကြားနေစွယ်စုံကျမ်းနှင့် ကိုက်ညီတန်ဖိုးများဖြင့် မောင်းနှင် နေသည်။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းစေတနာ့ ၀န်ထမ်းအသိုင်းအဝိုင်း အနေဖြင့် ကြော်ငြာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြားနေမှုနှင့် ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်စွမ်းအပေါ် အဓိကအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်ဟု အမြဲတမ်းခံစားခဲ့ရသည်နှင့် နောက်ဆုံးမှာတော့ ကြော်ငြာတွေကစာဖတ်သူတွေကို သူတို့ဖတ်နေတဲ့ ဆောင်းပါးတွေအပေါ် ယုံကြည်မှုအားနည်းသွားစေလိမ့်မည်။ ကြော်ငြာများထည်သွင်းမှုသည် မျက်နှာသာကိုဘက်လိုက်သော ဆောင်းပါးများသို့ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ဖိအားမပေးတောင်မှ၊ သတိရှိပါ သို့မဟုတ် အကယ်၍ မဟုတ်ခဲ့လျှင်၊ ၎င်းတို့ ဩဇာလွှမ်းမိုးရန်ကြိုပမ်းမှုကို စာဖတ်သူများ ကြောက်ရွံ့လိမ့်မည်။
ဖြည့်စွက်၊ ဖောင်ဒေးရှင်းသည် စာဖတ်သူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ခိုင်မာသော အမျှော်အမြင်များရှိသည်။ ဝဘ်ဆိုက်ကြော်ငြာအတွက် လက်ရှိမော်ဒယ်များသည် ၎င်းနှင့်မကိုက်ညီပါ၊ သင်ကြည့်ရှုနေသော အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ပါ။ စာဖတ်သူများအားသူတို့၏ပထဝီဝင်အနေအထားပေါ် မူတည်၍ ကြော်ငြာများကို ဖြန့်ဝေခြင်းသည် ကျူးကျော်၀င်ရောက်ရန်ဟု ဖောင်ဒေးရှင်းကယူဆသည်။
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Ask_a_question/FAQ/Business/my&oldid=22035907"
Last edited on 18 September 2021, at 19:11
This page was last edited on 18 September 2021, at 19:11.